Dhowr toddobaad oo lala socdo HomePod: waxa ugu fiican weli ma soo socdaan | Wararka Gadget
Dhowr toddobaad oo lala socdo HomePod: waxa ugu fiican weli ma imaan doonaan
Luis Padilla | | Gargaarka, Reviews
Labo todobaad ka hor Apple waxay si rasmi ah u daahfuratay HomePod, in kasta oo kaliya Mareykanka, Ingiriiska iyo Australia. Siideyn xaddidan oo xaddidan oo loogu talagalay waxa shirkaddu u egtahay inay sameyso dhawaanahan, taasina waxay siinaysaa in badan oo naga mid ah aragtida taas waxay ka jawaabtaa istiraatiijiyadda cusub ee shirkadda ee ah in aan wax si deg deg ah loo bilaabin illaa iyo inta software-ka laga hadlayo.
Tayo gaar ah oo maqal ah oo loogu talagalay afhayeenka cabirkiisa, laakiin weli softiweer aad u curdin ah oo sidoo kale lagu heli karo Ingiriisiga ayaa sameeya HomePod qalab leh anshax wanaag xilligan, laakiin leh qol ballaadhan oo lagu hagaajiyo. Dhabarka dambe dib u eegista hore in aad ka arki karto fiidiyowga la socda ereyadan, waxaan kuu sheegayaa dareenkeyga ka dib isbuuc ka dib adoo adeegsanaya afhayeenka cusub ee Apple smart.
1 Codku wali waa aasaasi, hadda
2 Waxaad laqabsatay xakamaynta codka goor hore
3 Ku xakameynta HomeKit aniga oo wata HomePod
4 Laakiin qol badan oo horumar ah
5 HomePod wali wuxuu ku jiraa beta
Codku wali waa aasaasi, hadda
Ku hadla caqli badan ayaa wali ku jira marxalad aad u horeysa waxa ay noqon karaan. Sidan ayey ku bilaabatay taleefannada casriga ah, oo hadda wicitaannada taleefanku waa waxa ugu yar ee ugu muhiimsan ee taleefanka gacantu ku siiyo, ugu yaraan dad badan. Xaqiiqdii waxaa jira maalmo aadan helin ama wicin wax wicitaan ah, hadana aad si joogto ah u isticmaaleysay taleefankaaga casriga ah. Tani waxay caan ku noqon kartaa dadka ku hadla caqliga dhawr sano gudahood sidoo kale, laakiin weli maanaan gaadhin halkan.
Sidaa darteed dhageysiga muusikada tayada leh ayaa weli muhiim u ah af-hayeen wanaagsan. Kama hadlayo kama hadlayo muusikada wanaagsan, maxaa yeelay qof walba wuxuu leeyahay dookhiisa, laakiin wuxuu ku saabsan yahay muusikada aad jeceshahay ee leh codka ugu fiican. HomePod wuxuu ku fuliyaa himiladaas midabbo duulaya. Iyada oo ay yartahay waxay ku buuxineysaa qolka oo dhan cod wanaagsan, iyadoon loo eegin meesha aad joogto. Bass wanaagsan, bartamaha wanaagsan iyo sare sare ... codka waxaa u qaybiyey toddobadiisa tweeter iyo kuwiisa baaska oo leh tayo aad u weyn, iyo processor-ka A8 ee ay ku dareyso gacmo-qabadka dhawaqa si fiican u socda.
Waxaan jeclaan lahaa inaan hubiyo sida laba HomePods isku xiran u shaqeeyaan, wax aan la qaban karin xilligan laakiin taasi waxay ku imaan doontaa cusbooneysiin software ah oo aan aad u dheereyn, laga yaabee inay la socoto iOS 11.3, laga yaabee waqtiga HomePod laga helo Spain iyo dalal kale horeyba hawsha ayaa la fuliyaa. Laakiin xilligan la joogo hal ku hadla waxaan dhihi karaa way ka badan tahay wax badan, waxaan dhihi lahaa ku filan, qol dhexdhexaad-weyn ah. Muga ugu badan ayaa waxyeello u leh dhagaha, laakiin ma qalloocdo. Xitaa muggeeda dhexe waa mid aad u sarreeya haddii aadan rabin inaad qasto deriska waqtiga hurdada.
Waxaad laqabsatay xakamaynta codka goor hore
Waxay noqotay wax caadi ah in la galo kiiska oo loo waco Siri, taasna hadda waxay ku qoran tahay Ingiriis. Ma doonayo inaan qiyaaso goorta aan ku isticmaali karno Isbaanishka, laakiin hadda xitaa carruurtaydu mar horeba waxay ciyaaraan muusikadooda iyagoo la hadlaya Siri, waxay weydiiyaan waqtiga ama cimilada. Waa guul in la helo (ku dhowaad) in lagu bixiyo kontaroolada jirka, iyo waxyaabo kale maxaa yeelay guud ahaan midna weligiis uma dhowa afhayeenka. Had iyo jeer ma dhigtid afhayeenka meel u dhow meesha aad fariisato, markaa maxaan u rabnaa badhamada?
HomePod wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xakamayso mugga, hakad gasho, aad bilowdo dib uqabasho, horay iyo gadaal adigoo riixaya dusha sare, laakiin markii aan u isticmaalay fiidiyowga dib u eegista si dhib yar ayaan mar kale u isticmaalay. La hadalka Siri ayaa waxtar badan leh, sidoo kale maadaama ay had iyo jeer dhageysato oo had iyo jeer ay ku maqasho adiga oo aan kor u qaadin codkaaga, wax khalad ah kuma saarin habkan. Waxaan isticmaalayay AirPods muddo sanad ka badan mana u baran inaan la isticmaalo Siri wali, laakiin HomePod gabi ahaanba way ka duwan tahay, waxay umuuqataa wax dabiici ah waxbadan oo dabiici ah waadna laqabsatay dhaqso. Ingiriisiga hada jira micnihiisu waa waxyaabaha qaarkood oo aadan sifiican u fahmin, ama ay jiraan liisas ay ku qoran yihiin magacyo Isbaanish ah oo aadan aqoonsaneyn, laakiin taasi waxaa lagu xalin doonaa markay tahay luuqadeena, waxaan rajeynayaa goor dhow iyo goor dambe.
Kuma adkeyn karo sida ugu wanaagsan ee Siri kuu dhageysto. Marka hore waxaad had iyo jeer ku hadashaa cod ka sareeya kan caadiga ah, laakiin marba marka ka dambeysa waxaad ogaaneysaa inaysan muhiim ahayn, maxaa yeelay wuxuu kaa maqlaa si ka wanaagsan sida aad u maleyn karto. Xitaa haddii buuq ka jiro qolka, telefishanka ayaa daaran ama xitaa waxaad ku dhageysanaysaa muusikada HomePod, Siri had iyo jeer wuu ku dhageystaa adiga oo aan kor u qaadin codkaaga. Ilaa xadkaas oo xitaa qofka shakiga badan aan u isticmaali karo "halbeegga dahabka", wax intaa ka badan oo aan ka yareyn xaaskeyga, ayaa durbaba bilaabay inuu isticmaalo Siri si uu u demiyo laambadda qolka fadhiga markaan seexanno. Kahor intaanan dhihin waa inaad aad ula hadashaa iPhone ama Apple Watch. Imtixaankii waa laga gudbay.
Ku xakameynta HomeKit aniga oo wata HomePod
Si loo xakameeyo qalabkaaga ku habboon ee HomeKit, waxaad u baahnaan jirtay Apple TV ama iPad (aad baa uga fiican kan ugu horreeya oo leh xulashooyin badan oo xakameyn ah), laakiin hadda waxaan ku dari karnaa HomePod liistadan. Afayeenka Apple wuxuu noqdaa udub dhexaad cusub oo loogu talagalay qalabyada la jaan qaadaya aaladda otomaatiga ah ee guriga Apple, oo ay la timid habab cusub oo lagu xakameeyo. Si aan la fahmi karin ahayn Apple uma uusan siin Apple TV-ga cusub 4K makarafoon noo oggolaaday inaan amarro bixinno si aad u damiso laydhadhka, hubi heerkulka ama isku xidhka fiilada. Waxaan addoomo u ahaan jirnay IPhone ama Apple Watch, taasina waxay ka dhigtay xakamaynta codkaas inaysan ku dhammaan wax dabiici ah.
Apple waxay qaaday talaabo aad u weyn oo HomePod ah laba sababood awgood. Apple TV maahan wax soo saar caan ah oo ka baxsan Mareykanka, in kasta oo imaatinka Netflix, HBO iyo Amazon Prime Video ay gacan ka geysteen in aaladda Apple wax badan la ogaado iyo in qaarkood ay horayba u arkeen mid xiiso leh, haddana weli waxaa jira dad badan oo naftooda kuma qancin karaan in Apple 200 Apple TV uu u qalmo. Iibso Apple TV kaliya si aad u maamusho HomeKit? Inbadan waxay u arkaan inay tahay wax aan macquul aheyn horeyba inay uheystaan ​​telefishino isku xiraya codsiyada ay ubaahan yihiin si ay u daawadaan taxanahooda ama filimadooda.
Si kastaba ha noqotee, waxyaabo ayaa ka duwanaan kara HomePod. Hadal tayo leh oo loogu talagalay dhageysiga muusikada oo leh naqshad aad u fiican oo waliba kuu oggolaaneysa inaad u shaqeyso sidii xarun HomeKit ah waxay sababi kartaa dad badan inay ugu dambeyntii go'aansadaan inay iibsadaan qalab isku habboon, isla sidaas ayaa loo adeegsan karaa si kale: dad badan oo adeegsadayaasha ah 'HomeKit' ayaa laga yaabaa inay ku hadlaan hadlku mid xiisa badan si aad u xakameyso fiilooyinkaaga, nalalkaaga iyo kuleylka. Kuwa soo saarayaasha sida Koogeek ama IKEA waxay sii wadaan inay muuqdaan inay bilaabayaan alaab iswaafaqsan qiimo jaban oo sidoo kale caawin doona.
Laakiin qol badan oo horumar ah
Markii aan ka hadlayno wanaagga HomePod xaqiiqdii kuma soo dari karno dhankiisa "smart". Siri waa kaaliyaha dal-ku-galka ah ee Apple soo saareysay sanado, iyo haddii iPhone-ka aan horeyba uga cabanayno inay hagaajiso, HomePod waa meel fog, oo ku dhow xafaayadaha Waa runtaa waxa ay qabato, sifiican ayey uqabataa: xakamaynta Apple Music, dirista iyo akhrinta farriimaha, weydiimaha internetka sida cimilada, sanadkii album la soo saaray ama ku dar qoraallo iyo xusuusin. Laakiin marka wax si fiican u shaqeeyaan, waxaad dooneysaa wax intaa ka sii badan, halkanna dhibaatadu way ka bilaabmaysaa.
Wax badan ayaa laga sheegay nidaamka Apple ee nidaamka deegaanka ee HomePod, in uusan la jaan qaadi karin Spotify (in kasta oo ay tahay, laakiin aan loo marin xakamaynta codka) ama codsiyada kale ee dhinac saddexaad. Aniga oo dhan waxaas waa, xilligan, wax la bixin karo. Sida iska cad waxaan ahay isticmaale Apple ah sidaa darteedna waxaan haystaa iPhone, iPad, Apple TV oo waxaan isticmaalaa Apple Music, sidaa darteed xaddidaadda adeegyada dhinac saddexaad wax badan iima saamaynayaan. Laakiin dhibaatadu waa taas Apple waxay xaddidday xitaa adeegyadeeda iyo barnaamijyadeeda, waana wax aan la fahmi karin.
Farriimaha, Qoraalada iyo Xusuusin, marka lagu daro Apple Music, intaas oo dhan ayaad u isticmaali kartaa hadda haddii aan ka hadalno barnaamijyada Apple. Iyo wax aasaasi u ah weydiinta dhacdooyinka kalandarka? In kasta oo ay u egtahay kaftan, HomePod ma heli karo barnaamijkaaga Kalandarka, xitaa ma sameyn karo wicitaan taleefan adiga oo aan taaban iPhone-kaaga. Maxaad ku sameyn kartaa AirPod-kaaga ama Apple Watch-kaaga adoo adeegsanaya Siri kuma sameyn kartid HomePodCajiib laakiin waa run. Apple waxay rabtay inay Siri ka dhigto xitaa qashin gurigeeda HomePod, taasina waa inay ahaataa sababo aynaan garanayn laakiin ay tahay in dhakhso loo xaliyo.
Fursadaha uu HomePod ku siinayo aad ayey u weyn yihiin, mana aha oo kaliya dhanka muusikada. Waxa u sii dheer waxa ay horay u qabato (oo aan ku celiyo, si fiican ayey u qabataa) iyo waxa muuqda ee ay qaban karto (sida dhacdooyinka jadwalka taariikhda, wicitaanada ama la-tashiga sare ee internetka), adduunyo fursado ayaa kuu furan taas oo kaa dhigaysa inaad ku riyooto . Aniga ayay igu dhacdaa inaan isticmaalo oo aan dhex maro TV-ga Apple TV aniga oo aan taaban Siri Remote, Waxaan bilaabayaa ciyaarida taxanaha aan ugu jeclahay anigoo lahadlaya HomePod-kayga, isla markaana waan iska daminayaa. Kaliya waa tusaale wax dhici kara wax yar, markasta oo Apple rabto, dabcan.
HomePod wali wuxuu ku jiraa beta
Xaqiiqdu waxay tahay in HomePod uu wali kujiro horumar. Waxaa laga yaabaa in shirkadda ay ku deg degtay daah-furkeeda iyada oo xaqiiqda ah in alaabooyin la mid ah ay horeba u jireen, sida Google Home ama Amazon Echo, ama Sonos oo horumarinaya ku hadlaheeda isla markaana ku daraya shaqooyin cusub oo "smart" ah tayada ay caanka ku tahay raadinta qabashada. qayb ka ah suuqan cusub ee muuqda. Siidayn ku xaddidan saddex dal (UK, US iyo Australia) oo keliya Ingiriismarka Siri horeyba u taageerto luuqado kale oo badan, iyo waxyaabo aad u yar marka la barbar dhigo waxa Siri ku sameyn karo iPhone-ka.
Dhammaan calaamadaha ayaa tilmaamaya HomePod in aan la dhammayn, sida alaabooyin kale oo badan oo shirkaddu soo saartay. Isla sidaas oo kale ayaa looga hadlay Apple Watch waqti aan sidaa usii fogeyn, waana la sheegayaa iyada oo aan la sheegin heerka Applew ee smartwatch-ka uu haatan yahay, iyadoo aan wax tartan ah ka jirin suuqan. HomePod wuu horumari doonaa, shaki kuma jiro, maxaa yeelay waa fursad aysan Apple seegi karin. Had iyo jeer waxaa la yiraahdaa inay fiican tahay inaad iibsato jiilka labaad ee wax kasta oo cusub oo Apple ah, anigu ma oggola. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku raaxeysto hagaajinta HomePod-kan koowaad sida ay u muuqdaan, inta ka horreysana, waxaan ku raaxeystaa dhawaaqa aan caadiga ahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Gargaarka » Dhowr toddobaad oo lala socdo HomePod: waxa ugu fiican weli ma imaan doonaan
Twitter wuxuu rabaa inaan kaliya u isticmaalno codsigiisa aaladaha mobilada oo wuxuu ku dhow yahay inuu halkaas gaaro
Nintendo Switch wuxuu heli doonaa aruurinta ciyaaraha SNK